ကျမ ရဲ့ သုံးလွန်း တင် – Hlataw.com
ကျမ ရဲ့ သုံးလွန်း တင်
ကျမ လိုမိန်းကလေးတယောက်မှာ အတူနေတဲ့ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆို ယုံမလားဟင်… ထူးခြားတဲ့ကျမဘဝကဒီလိုစခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းကိလေသာတဏှာနဲ့မကင်းပါဖူး.. ကျမလဲလူတယောက်ပဲမို့အပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရပါဖူး.. ကျမ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ကိုကိုနဲ့စတွေ့ခဲ့တယ် ကိုကိုက ကျမထက်၆နှစ်ကြီးတယ်လေ.. ဒီအရွယ်ထိ ပိပိပြားပြားနေလာခဲ့တဲ့ကျမ ကိုကိုရဲ့စူးရဲတဲ့အကြည့်တွေမခံနိုင်ပါဖူး.. တိုတိုပြောရရင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ် နှစ်သစ် နေ့လေးမှာပေါ့..။ ကျမကအဖြေပေးတာနဲ့ကိုကိုက ကျမကိုမျက်နှာအနှံ့အနမ်းတွေပေးလိုက်တာ ကျမမှာ ရင်ထဲမောပြီးနေရောဘဲလေ.. ကိုကိုကတဆင့်တက်ပြီး ကျမအင်္ကျီအောက်ထဲလက်ရှိုထည့်တယ် နို့ကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်စကိုင်ပါတော့တယ်..
အထိအတွေ့ကြောင့်သာယာတာရောကြောက်တာကောပေါင်းပြီးလှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်ပါဖူး လူတွေလဲရှိတယ်ကိုကိုဆိုတော့ ကိုကိုက လူကြားထဲမှာနှိုက်ရတာကြိုက်တာတဲ့လေ.. ကိုကိုအမိန့်တိုင်းပါဘဲ ကျမကသိပ်ချစ်တာကိုး… ကျမက ကိုယ်လုံးလှတဲ့မိန်းမတယောက်ပါ ရင်၃၅ ခါး၂၄ တင် ၃၆ နဲ့လုံးကြီးပေါက်လှပေါ့ ကိုကိုကသိပ်ကဲတာဘဲ ကျမနို့ကို ကိုင်ရုံအားမရလို့ ဘော်လီကိုပင့်ပြီးအငမ်းမရစို့တယ်လေ နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့ထိုးပြီး နို့အုံကြီးတခုလုံးကို စုပ်စွဲပြီးစို့တာ အို ဆွေမျိုးကိုမေ့ရောပဲ ကျမလေဖြစ်နိုင်ရင်ကျမနို့နှစ်လုံးကိုကိုကို့ပါးစပ်ထဲခံတွင်းထဲတသက်လုံးသိမ်းထားစေချင်လိုက်တာ ကျမမှ ကောင်းလွန်းလို့ အား..အင်း…နဲ့အသံပေါင်းစုံထွက်နေပါတယ်.. ဒါနဲ့ကိုကိုက သဲလေးဟိုတယ်သွားရအောင်နော်ဆိုတော့ မငြင်းချင်တော့ပါဖူးလေ.. ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဆိုပြီး ဟိုတယ်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့… အခန်းထဲလဲရောက်ရော……. ကိုကိုရဲ့လက်တွေအနမ်းတွေဟာ အရမ်းကိုကြမ်းတမ်းလာပါတယ် .. အိုး..ကျမနို့ကြီးနှစ်ဖက်လုံး ပြုတ်ထွက်မတတ်ညှစ်ခံရတယ် ကျမအတွက်ကအဲဒီနာကျင်တာကပဲ ဖီးလ်တစ်မျိုးလေ.. ကျမနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းတယ် လျှာကိုကလိတယ် ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျမ စပ်ပက်ကို ကလိတယ် နို့သီးခေါင်းလေးကိုချေပေးတာရယ် အစိလေးကိုချေပေးတာရယ် အရမ်းကိုဇိမ်ရှိတာပေါ့ရှင်..
အား ..အသဲကိုခိုက်နေတာဘဲ.. ပြီးတော့ ကိုကိုကပြောတယ် အိမ့်လေးကိုကိုမနေနိုင်တော့ဘူးကိုကို့လီးကိုစုပ်ပေးပါလားကွာတဲ့အိုကျမတခါမှဒါမျိုးမလုပ်ဖူးဘူးလေ ကိုကို့လီးက အရမ်းကိုကြီးပါတယ် တိုက်ဂါးဘီယာဘူးခွံလောက်ရှိတယ် အရှည်ကလဲ ခုနစ်လက်မရှိတယ်လေ ကျမပါးစပ်နဲ့တောင်မဆန့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ချစ်တော့လဲစုပ်ပေးရတာပေါ့ ကိုကိုကတော့ကျမပါးစပ်ထဲကို သူ့လီးကြီးညှောင့်ပြိး တအားအားနဲ့ ဖီးတက်နေပါတယ်.. ပြီးတော့ စုပ်တာရပ်ခိုင်းပြီး အိမ့်လေး ဖင်ကုန်းလိုက်ကွာလို့ပြောတယ် ကျမလဲကိုကို့အမိန့်အတိုင်း ကုတင်ပေါ်မှာဖင်ကုန်းပေးရပါတယ် ကိုကိုကသူ့လီးကြီး ကျမ စပ်ပက်အဝမှာတေ့ပြီး အိမ့်လေး အောင့်ခံနော် ကိုကိုလိုးတော့မယ်ပြောတယ်လေ…ကျမမှာ ယွစိတက်ပြီး ကိုကိုမလိုးရင်တောင်စက်ပက်ထဲသခွားသီးကြီးတလုံးလောက် ထိုးထည့်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာပါပြီ.. ကိုကိုရယ်စိတ်ကြိုက်သာလိုးပါတာ့ရှင်ဆိုပြီး စောက်ခေါင်းထဲကိုကို့လီးဝင်အလာကိုငံ့လင့်နေရပါတယ်….။
ကျမက ယောကျာ်းနဲ့ဖင်မခံဖူးပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာအာသာဖြေပြီး လီးတုထည့်ဖူးတော့ အဝင်မခက်လှပါဘူးကိုကို့လီးကြီးတရစ်ချင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဝင်လာတာကိုခံစားရတယ်.. ပြီးတော့ ကျမဆံပင်ရှည်တွေကိုနောက်ကနေဆွဲကိုင်ပြိး ခွေးလိုးသလိုဒုန်းစိုင်းလိုးပါတော့တယ် ကျမလေ အလိုးခံရတဲ့အရသာကိုသေလုအောင်စွဲမက်သွားပါတယ်ရှင် .. အားကိုကိုရယ် ကျမတကိုယ်လုံးကရှိသမျှအပေါက်တွေထဲကိုကို့လီးကြီးထည့်ပေးပါနော်.. ကျမနို့ကြီးတွေညှစ်ပါဦး စို့ပါဦး ကျမဖင်ကြိးကိုရိုက်ပါဦး အား..ကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီးအော်ဟစ်သောင်းကျန်းပြီး ပိုးစိုးပက်စက်အလိုးခံနေမိပါတော့တယ်ရှင်… အဲညက ညလုံးပေါက်အလိုးခံပြီး မနက်အိမ်ပြန်တော့အရမ်းကိုပင်ပန်းနေပြီလေ.. ဒါပေမယ့် နောက်နေ့လည်မှာကိုကိုကဖုန်းဆက်ခေါ်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူလည်ကြမယ်ဆိုပြီးသွားတယ်..အဲ့ဒီမှာ..ကိုကိုဘယ်လောက်ဆိုးလဲသိလား သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲရောက်ကာမှပဲ ကိုကိုက လူကြားထဲမှာ လိင်ဆက်ဆံရတာကို စွဲလမ်းတဲ့သူမှန်းသိလိုက်ရတယ် သူ့ဘော်ဒါတွေနဲ့ကျမကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်. အားလုံးက ကျမကိုသိပ်လှတာပဲလို့ပြောကြတယ်.. သူ့ဘော်ဒါတွေက ကျမနို့ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီး မျက်လုံးတောင်မခွာနိုင်ဘူး . ကိုကိုက ဒါငါ့ပစ္စည်းတွေကွလို့ပြောပြီး ကျမအင်္ကျီထဲကိုလက်နှိုက်ပြီး နို့ကြီးတွေကိုစကိုင်ပါတော့တယ်..။
ကျမလဲရှက်တော့ရှက်ပေမယ့် အခန်းထဲမှာဖြစ်နေတော့ သိပ်လဲထူးထူးထွေထွေပြောမနေတော့ဘူး ကိုကိုကြိုက်သလိုနေပါစေတော့တယ်.. ခဏနေတော့ စားသောက်စရာတွေရောက်လာပြီး စားကြပါတယ် ..ကိုကိုက စားသောက်ပြီးသူများတွေအအေးသောက်ကြချိန်မှာ မင်းတို့အချိုရည်တွေထက်အားရှိတဲ့ဟာ ငါ့မှာရှိပြီးသားလို့ပြောပြီး ကျမကို နို့လှန်ခိုင်းပြီးစို့ပါတယ်.. သူ့ဘော်ဒါတွေလဲအားကျမခံသူတို့ဆော်လေးတွေကို ကိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်.ဒါပေမယ့်ကျမလောက်ဘယ်သူမှ မကိတ်ကြဘူးလေ.. အားလုံးကကျမနို့ကြီးတွေကိုပဲကိုင်ချင်နေကြတယ် ကိုကို့ကိုသိပ်အားကျနေကြတယ်ပေါ့ရှင်။ ကိုကိုလဲ နို့စို့ရာက လီးတောင်လာပြီး ကျမကိုစကတ်ဆွဲလှန် ကျမစပ်ပက်ကိုအသကုန်လျှာနဲ့လျက်လို့ ကျမမှာလူးလိမ့်ကော့ပျံနေတာပဲလေ သူ့ဘော်ဒါတွေကလဲ လက်ခုတ်တီးပြီးအားပေးကြတယ် လူရှေ့မှာဖင်ခံရတာ တမျိုးပေမယ့်စိတ်ကိုပိုကြွစေတယ် ပိုပြီးယားလာစေတယ် ကိုကိုက ကျမကိုနံရံမှာမတ်တပ်ရပ်လက်ထောက်စေပြီး အနောက်ကနေပင့်လိုးပါတော့တယ်..။ ကိုကို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လီးကြီးက ကျမသားအိမ်ကိုဖောက်ပြီးကျမ လည်ချောင်းထဲကထွက်တော့မလိုပါဘဲ.. အား ကိုကိုရယ်ကျမစောက်ပတ်ကွဲအောင်လိုးပါနော်
ကျမဖင်ကြီးပြုတ်ကျသွားအောင်လိုးလိုက်စမ်းပါလို့အော်ပြီးနံရံကိုကုတ်ခြစ်ရင်း ခံကောင်းကောင်းနဲ့ခံလိုက်တာ ကိုကို့သုတ်ရည်တွေထွက်တော့မှာမို့ ကျမကိုဒူးထောက်ခိုင်းပြီး လီးကြီးပါးစပ်ထဲထိုးထည့်သုတ်ရည်တွေမြိုချပြီးခါမှ သတိပြန်ဝင်လာပါတယ်…။ ဒီအချိန်မှာ ကိုကို့ဘော်ဒါတွေက သားကြီးမင်းဆော်လေး စောက်ရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ငါတို့လဲပေးလိုးဦး မင်းတကောင်ထဲလီးပါတာလားကွ ငါတိုအဖွဲ့က ဝေစားမျှစားဆိုတာပြောထားဦးလေလို့အော်ကြပါတယ်.. အဲဒါနဲ့ကိုကိုလဲသူ့ လီးကသုတ်ရည်တွေကုန်အောင်စုပ်ခိုင်းပြီး ကျမကို ကဲချစ်အိမ့်လေး ကိုကိုတို့ခဏနေ အဖွဲ့ လိုက် ဆက်လုပ်ကြမယ်နော်ဆိုပြီးပြောပါတော့တယ်… ကိုကိုက အဖွဲ့ လိုက်လုပ်မယ်ပြောတော့ ကျမသိပ်အံ့သြသွားတယ်… အချစ်ဆိုတာမျှဝေပေးတာမဟုတ်ဘူးမလား.. သို့သော်လဲနိုင်ငံခြားအောကားတွေထဲမှာလိုလူအများကြီးနဲ့ မိန်းမတယောက်ထဲခံရတာဘယ်လိုဖီးလ်ရှိလဲကျမသိချင်မိပြီလေ.. ဒါနဲ့ကိုကို့သူငယ်ချင်းငါးယောက် ကိုကိုတယောက်ပေါင်းခြောက်ယောက်နဲ့အလိုးခံဖို့သဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီတခါတော့ကိုကို့ဘော်ဒါရဲ့ကွန်ဒိုအခန်းကျယ်တခုမှာစခန်းသွားရမယ်ပေါ့နော် ရောက်ရောက်ချင်းဘဲယောကျာ်းကြီးခြောက်ယောက် ကျမကိုစားမယ့်ဝါးမယ့်အကြည့်နဲ့တင်တကိုယ်လုံးယွစိတက်လာပြီး စောက်ပက်ကတယွယွ ဖြစ်လာပါတယ်..ကိုကိုက မိတ်ဆက်ပေးတယ် ကိုသီဟ ကိုမင်းဇော် ကိုဖြိုးကြီး ကိုစိုးကြီးနဲ့ ကိုရဲတဲ့ အဲ့အချိန်မှာကျမကတော့ရင်တခုံခုံနဲ့ပေါ့.. ကိုကိုကပဲစပြီး ကျမအင်္ကျီကိုဆွဲလှန်ပြီးဘော်လီကိုပင့်တင်လိုက်ပါတယ် ကျမရဲ့လုံးတစ်ပြီးဖွင့်ထွားလှတဲ့နို့ကြီးတွေအပြူးလိုက်ထွက်လာတာကိုကြည့်ပြီးကိုမင်းဇော်ကတဖက်ကိုလာကိုင်ပါတယ်။ကိုကိုကတဖက်ကိုင်ပြီး ကျမရဲ့နီတျာရဲနို့သီးလေးတွေကိုလက်မနဲ့လက်ညှိုးသုံးကာချေပေးတယ် ကိုမင်းဇော်ကတော့နို့ဆာနေတဲ့ကလေးလိုအငမ်းမရစို့ပါတယ်ကျမမှာကောင်းလွန်းလို့ကိုမင်းဇော်ခေါင်းကို အတင်းကိုင်ကျမရင်ဘတ်ကိုကော့ပေးပြီး ကျမနို့ကြီးတလုံးလုံးသူ့ပါးစပ်ထဲဝင်အောင်စို့ခိုင်းမိတယ်ကိုကို့ကိုလဲခေါင်းကိုဆွဲယူပြီးအတင်းစို့ခိုင်းပါတယ်
အားကောင်းလိုက်တာ စဉ်းစားကြည့်ပါရှင်သန်မာထွားကျိုင်းတဲ့ယောကျာ်းကြီးနှစ်ယောက်က ကိုယ့်နို့ကြီးကိုအပြိုင်အဆိုင်စို့နေတာ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုသီဟကကျမစောက်ပက်ကိုလျက်ဖို့ပြင်ပါတယ်။ ကျမပေါင်ကားပြီးသူ့ခေါင်းကြီးတိုးဝင်လာတာကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် သူ့လျှာကြီးကကျမစောက်စိလေးကိုကလိလိုက်ကျမစောက်ခေါင်းထဲတိုးဝင်လိုက်နဲ့အရသာပေါင်းစုံပေးပါတယ် ကိုဖြိုးကြီးကလဲအားကျမခံသူ့လီးကြီးကိုထုတ်ပြီးကျမပါးစပ်ထဲထည့်ပါတယ် သူ့လီးကလဲကိုကိုနဲ့ဆိုဒ်တူလောက်ရှိမယ်သူကတေ့ာဂေါ်လီတွေထည့်ထားတယ်ရှင့်ကိုစိုးကြီးကလဲ သူ့လီးကိုထုတ်ပြီးကျမကိုလက်နဲ့ဂွင်းတိုက်ခိုင်းပါတယ် ကျမမှာနို့စို့ခံရတဲ့ဖီးလ်ရယ်စောက်ပက်လျက်ခံရတဲ့ဖီးလ်ရယ်လီးစုပ်ရတဲ့ဖီးလ်ရယ်ကဂွင်းတိုက်ပေးရတဲ့ဖီးလ်ရယ် အို နတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာလားလို့တောင်မှတ်ရပါတယ်..။ ကျမကိုစိတ်ကြိုက်ကိုင်တွယ်နေရာလဲကြပြီးတဲ့အခါမှာ ကိုကိုက ချစ်အိမ့်လေး ဖီးလ်တက်နေရင်ကိုကိုတို့လိုးကြရအောင်ဆိုပီးပြောပါတယ် ကိုသီဟက မင်းဆော်လေးဖင်ဖွင့်ပြီးပလားမေးတယ် ကိုကိုကဒီနေ့မှဖွင့်မှာကွလို့ဖြေတယ် အိုကျမကိုဖင်လိုးကြတော့မှာပါလားဒီအတွေ့အကြုံသစ်ကရော ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ ကိုကိုရယ်ကျမဖင်ကိုနှစ်ခြမ်းကွဲသွားအောင်လိုးစမ်းပါလို့ ပါးစပ်ကဖွင့်ဟပြီးပြောမိပါတော့တယ် ကိုကိုကစိတ်ချအိမ့်လေးကိုကိုလိုးပေးမယ်နော်ဆိုပြီး လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပါတယ် ကျမရဲ့အောက်မှာတော့ ကိုသီဟကပက်လက်နေပြီးလီးကိုထောင်ထားတယ် သူ့လီးပေါ်ကျမစောက်ပက်နဲ့တပ်ပြီးဝင်အောင်ထိုးပြီးမှကိုကိုရှိတဲ့ဆီဖင်လေးကိုကုန်းလိုက်ပါတယ်။
အိမ့်ရယ်ဖင်ကြီးတွေကအယ်နေတာပဲကွာလိုးခွဲရမှာအားရလိုက်တာတဲ့ ကိုကိုဆီကဒီအသံကြားတော့ကျမအလှအတွက်မာန်ဝင့်ပြီး ဖင်ခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖင်ခေါင်းထဲကို ကြီးမားတဲ့လီးကြီးတရစ်ချင်းဝင်လာတာကိုခံစားလိုက်ရတယ် စစချင်းတော့အောင့်မျက်သွားသလိုပဲ.. ကိုကိုကအိမ့်လေးပါးစပ်ဟပြီးအသက်ရှူလိုက်စိတ်လျှော့ပြီးဖင်ပေါက်ဖွင့်ပေးလို့ပြောတယ် လုပ်ကြည့်နေရင်းဖင်ထဲကိုလီးကြီးတဆုံးဝင်ပြီး အပြည့်အသိပ်ဖြစ်သွားပါတယ်အောက်ကတယောက်ကလဲစောက်ပက်ထဲကိုပင့်ဆောင့်လိုးနေတယ်။ အပေါ်ကကိုကိုကလဲဖင်ပေါက်ကိုအနောက်ကနေအားကုန်လိုးနေတယ် နို့ကြီးနှစ်ဖက်ကိုလဲဘေးကနေတယောက်ဆီဝိုင်းဆွဲနေကြတယ် ပါးစပ်ထဲကိုလဲလီးကြီးတချောင်းထည့်ခံထားရပြီး ပါးစပ်ကိုလိုးခံနေရပါတယ်တခြားမိန်းမတယောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမယ်မသိပေမယ့် ကျမအတွက်တော့ဒါဟာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့စည်းစိမ်ပါဘဲကုန်းထားတဲ့ ဖင်ကြီးကိုလဲ လီးတချက်ဝင်တိုင်းတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ချခံရတာဟာ ကာမစိတ်ကိုပိုပြီးတက်ကြွစေပါတယ်။
အိမ့်လေးရယ် ကောင်းလိုက်တာဖင်ကြီးကအိပြီးစီးနေတာဘဲ တောက် တနေကုန်စိမ်ထားချင်တယ်ကွာလို့ပြောတယ် အောက်ကလူကလဲ စောက်ပက်ကလဲကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ရှယ်ဘဲကွာ မျှော့လဲပါတယ်ငါ့လီးကိုစုပ်ဆွဲနေတာဇိမ်ဘဲလို့ပြောတယ် လီးစုပ်ခံနေတဲ့ကိုစိုးကြီးကလဲပါးစပ်ပေါက်ကလဲရှယ်ဘဲငါလိုးဖူးသမျှစောက်ပတ်တွေထက်တောင်စုပ်နိုင်တယ် မင်းဆော်ကတော့ကွာမင်းယူပြီးလဲငါတို့လာလာလိုးလို့ရတယ်မလားဟေ့ရောင်လို့ ပြောတာတွေကြားရတယ်.. ကိုကိုကတော့တအားအားတရှီးရှိးနဲ့ အဲလိုတနာရီလောက်လိုးပြီး သုတ်ရည်တွေကျမပေါ်ကိုပန်းချကြပါတယ် ပြိးတော့ နေရာတွေပြောင်းကြတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီနေ့ကအမျိုးစုံပါဘဲ ကျမစောက်ပတ်ထဲကို လီးနှစ်ချောင်းတပြိုင်ထဲထိုးပြီးလဲအလိုးခံခဲ့ရပါတယ်ကျမကိုကုတင်မှာကြိုးတုတ်ပြီးခြေတွေလက်တွေ အကုန်ကားထားပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်တိုက်လိုးကြပါတယ် ပိးတော့သံတန်းတခုမှာကြိုးချည်ပြီးနို့သီးခေါင်းတွေကိုကျဉ်စက်နဲ့တို့တယ်ကြာပွတ်နဲ့ရိုက်တယ် အဲဒီလိုစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေရတာကိုကကျမအတွက် အရသာရှိနေတာပါတနေကုန် ဘယ်နှစ်ချီပြီးမှန်းတောင်မသိစောက်ပတ်ထဲကအရည်တွေကုန်ပြီလို့ထင်ရတဲ့အထိ အရည်တဝေါဝေါပန်းထွက်ရင်းကာမစည်းစိမ်ခံစားခဲ့ရတယ်လေ..
ကျမအတွက်တော့ကိုကိုသာကမ္ဘာကြီးလို့ထင်ခဲ့ရတယ်ကိုကို့လီးကြိးနဲ့ ကျမစောက်ပတ်တစက္ကန့်လေးတောင်မချွတ်ချင်ပါဖူးရှင် ဒါပေမယ့်ကိုကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့စင်ကာပူကိုတစ်ပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ လီးအရမ်းဆာနေတဲ့ကျမဒုက္ခစတွေ့ပါတော့တယ်..အလိုးမခံရတာနှစ်ရက်အထိတော့နေနိုင်ပါသေးတယ် ကိုယ့်ဖာသာ လီးတုတချောင်းဝယ်ပြီးစိတ်ဖြေတာပေါ့ သုံးရက်မြောက်နေ့မှာဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘူးကျမစိတ်တွေယောက်ယက်ခတ်ကုန်ပြီအိပ်မပျော်စားမဝင်နဲ့ စောက်ပတ်ထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းဖင်ခေါင်းထဲမှာယွစိယွစိနဲ့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်နေပါပြီ…ဒါနဲ့စိတ်ပြေလက်ပျောက်လမ်းထိပ်ကအလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလျှော်အနှိပ်ခံဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်.. အလှပြင်ဆိုင်ကမိန်းမလျာတွေစုပြီးဖွင့်ထားတာပါ.. ကောင်လေးတွေတရုံးရုံးနဲ့ရပ်ကွက်ကအတော်ဘဲမျက်စိနောက်ပါတယ်..
ဆိုင်ရောက်တော့အခြောက်မသုံးယောက်ထဲရှိတယ် အခြောက်ပေမယ့်အကိတ်တွေနော်အရပ်တွေကလဲအမြင့်ကြီး.. ကျမကလဲ ကိုကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်ကထဲကနေ့ရှိသရွေ့ နို့နှိုက်ဖင်နှိုက်အလိုးခံနေရတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးတောင့်တင်းနေတယ်။ အရင်ထဲကကြီးတဲ့နို့တွေဟာအခုဆူဖြိုးပြီးအယ်နေတာဘဲဖင်ကြီးတွေဆိုလုံးဝိုင်းပြီးတင်းကားနေတယ်.. အပေါ်ကနေဆောင့်ပေးလိုးပေးရလို့ခါးကလဲသိမ်သိမ်လေးပေါ့.. လရည်တွေနေ့တိုင်းမြိုချရလူးရလို့အသားအရည်လဲ အရမ်းလှနေတာအခြောက်မတွေမနာလိုအားကျနေတယ်ထင်ပါရဲ့.. ကျမလဲ ခေါင်းလျှော်ခုံမှာပက်လက်အနှိပ်ခံနေတယ် အားနေကြတော့အခြောက်တို့ထုံးစံအတိုင်းအနားလာဟိုထိဒီထိပေါ့ ကျမနို့ကိုလာကိုင်ကြည့်ပြီး ဟယ်အိမ့်မရယ် နင့်နို့ကြိး ကြီးလိုက်တာငါတို့မှာဆေးထိုးထားရတာနင့်လောက်မလှဘူးဟယ် ဖင်ကြီးကလဲကိတ်လိုက်တာနင့်တော့ဘဲတွေဝိုင်းနေမှာ ငါတို့လဲမျှပါဦးလ်ုိ့ပြောတယ် သူတို့်ကအခြောက်ပေမယ့်အထိအတွေ့က ယောကျာ်းလေးလိုဆိုတော့ကျမ ဖီးလ်တက်လာတယ်..
အဲဒီမှာအကြံတခုရလိုက်တယ်..အခြောက်လဲလီးပါတာဘဲ ငါမြှူဆွယ်ပြီးလိုးခိုင်းလို့ရလောက်မယ်ပြီးရင်သူတို့ကအခြောက်ဆိုတော့နှူတ်လုံမှာဘဲဆိုပြီး တွေးမိလိုက်ပါတော့တယ်…။ အဲဒါနဲ့ သူတို့ကို ငါ့နို့ကိုလှန်ပြီးကိုင်ကြည့်ကြစမ်းနင်တို့မြင်ဖူးတဲ့ စီလီကွန်တွေနဲ့တူလားလို့ဆီုးပြီးလှန်ပြလိုက်တယ် အခြောက်မတွေဝိုင်းကိုင်ကြည့်ကြတယ်. နင်တို့နို့စို့ဖူးလားမေးကြည့်တော့သူတို့ကိုဖင်ချတဲ့ကောင်တွေဖီးလ်တက်အောင်တော့စို့ပေးရတယ်တဲ့..ဒါနဲ့…ငါ့ကိုစို့ကြစမ်းဆိုပြီးပေးစို့လိုက်တယ်..ပြီးတော့ကျမရဲ့ကားအိဝိုင်းစက်တဲ့ဖင်ကြီးကိုလှန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အခြောက်တွေမျက်လုံးအရောင်တောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်…။ သူတို့ဝတ်ထားတဲ့စကဒ်အောက်ပေါင်ကြားမှာဖုဖောင်းလာတာမြင်ရတဲ့အခါမှာ ကျမအကြံအောင်ြပီဆိုတာသိလိုက်ပြီပေါ့ အခြောက်မသုံးကောင် လီးတောင်နေတာသေချာပြီဆိုတော့ ကျမဖင်ကြီးနဲ့သူတို့ကိုပွတ်ကြည့်လိုက်တယ်..မသိမသာလေးပေါ့၊ အကိတ်ဆုံးတယောက်ကို ငါ့ကိုလဲနင့်နို့ပြပါဦးဆိုပြီးလှန်ကြည့်လိုက်တယ် သူကဆီလီကွန်ထည့်ထားတာပါ အယ်စတုံကြီးပေါ့ကျမလက်တဖက်နဲ့အားရပါးရနယ်ပြိး နို့သီးခေါင်းကိုစို့ပေးတော့သူဖီးလ်တွေတက်လာတယ်တအင်းအင်းငြီးလို့ ဘေးကနှစ်ယောက်ကလဲသူတို့နို့သူတို့ပွတ်လို့အားကျနေလေရဲ့…။
ကျမလက်တဖက်နဲ့သူ့စကဒ်ကိုလှန်ပြီးပေါင်ကြားထဲကလီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ် သူလဲခြောက်သာခြောက်တာလီးကခြောက်လက်မလောက်ရှိမယ် ရုတ်တရက်ငုံ့ပြီးဒစ်ထိပ်ဖျားလေးကိုစုပ်လိုက်တယ်သူတ်ရည်ထွက်ပေါက်လေးကိုလျှာနဲ့ ကလိပေးလိုက်တော့သူမနေနိုင်တော့ဘူးလေ ဘေးကနှစ်ယောက်ကိုလဲလက်တဖက်ဆီနဲ့ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်.. သူတို့ကတော့သိပ်မကြီးကြဘူးတယောက်ကလီးတိုတယ်တယောက်ကတော့သေးတယ် ပိန်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့သူတို့အကုန်လီးတွေတောင်လာချိန်မှာ အကိတ်ဆုံးတယောက်ကို တွန်းလှဲပြီးသူ့ပေါ်ကတက်ခွကျမစောက်ပက်ထဲသူ့လီးထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဘေးကတယောက်ကိုလဲပါးစပ်ရှေ့လာခိုင်းပြီးလီးစုပ်ပေးလိုက်တယ် သူတို့မှာလဲဖင်ခံတဲ့အတွေ့အကြုံသာရှိတာဒါမျိုးကျကျမနဲ့မှ ပြန်ကျားရေးဖြစ်ကုန်တော့အရာရာကျမဘဲဦးဆောင်နေရတယ်ပေါ့. .အောက်ကလီးကြီးကိုအငမ်းမရဆောင့်နေမိတယ် ကျမဖင်သားကြီးတွေတုန်ခါရမ်းနေတဲ့အထိ..ကျမနို့ကြီးတွေလဲရမ်းခါနေတာပေါ့.. အခြောက်ခမျာလဲကျမဆာဆာနဲ့တက်လိုးတဲ့ဒဏ်ကိုအားရပါးရခံနေရရှာပါတယ် အောက်ကအခြောက်မဇွန်သစ္စာကိုကျမစိတ်ရှိလက်ရှိတဖောင်းဖောင်းနဲ့ဆောင့်ချနေပါတယ်..။
ခုချိန်မှာကျမကယောကျာ်းတယောက်လိုတောင်ထင်မိတယ်..သူ့နို့ကြိးတွေကိုလက်နဲ့အားကုန်ဆွဲဆောင့်တလှည့် သူ့နို့သီးခေါင်းတွေကိုလက်နဲ့ဆောင့်စွဲတလှည့်ပါးစပ်နဲ့စို့ခါတလှည့်သူ့လည်တိုင်ကိုနမ်းခါတလှည့် သူ့လျှာကိုကျမလျှာနဲ့ကလိခါတလှည့်အလုပ်တွေရှုပ်နေပါတော့တယ် ဇွန်သစ္စာကလဲအိမ့်မရယ်ငါ့နို့တွေဆွဲပေးပါဦးစို့ပေးပါဦးနင်စို့တာခံလို့ကောင်းလိုက်တာငါဖင်ခံဖူးတဲ့အကောင်တွေ ဆယ်ယောက်ဝိုင်းစို့တောင်နင့်ကိုမမှီဘူးလို့အော်ဟစ်ငြီးတွားပြီးအလိုးခံနေပါတယ်.. ဟား..တကယ်တော့သူကလီးပိုင်ရှင်ပေမယ့်အောက်ကနေတော့ကျမကလိုးသူ သူကအလိုးခံပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော့်။ ဘေးကပန်းအိပ်မက်နဲ့စုလေးငယ်ဆိုတဲ့အခြောက်နှစ်ကောင်ကတော့ ကျမတို့ကိုကြည့်ပြိးနှာထန်ကာတယောက်နို့တယောက်ကိုင်ချေနေကြ တယောက်လီးတယောက်ကိုင်နေကြပါတယ်အချင်းချင်းဖင်ချကြဖို့တော့မဝံ့ရဲသေးဘူးထင်တယ်.. ကဲဟိုနှစ်ယောက်ဘာလုပ်နေတာလဲတယောက်က ငါ့ဖင်ကြီးကိုဆောင့်လိုက်တိုင်းလက်ဝါးနဲ့ဖြောင်းခနဲမြည်အောင်လာချစမ်း နောက်တယောက်ကငါ့ပါးစပ်ထဲနင့်လီးလာတပ်စမ်းလို့အမိန့်ပေးရပါတယ်.. ကျမအကြိမ်တစ်ရာလောက်ဆောင့်ပြီးမောဟိုက်နေချိန်မှာဘဲဇွန်သစ္စာဆီကနေ အိမ့်မငါပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အသံထွက်လာလို့အမြန်ဆောင့်ပြီးကျမအရင်ပြိးလိုက်ရတယ်။
သူ့လီးကိုကျမစောက်ပက်ကနေချွတ်ပြီးသူ့သုတ်ရည်တွေအမြန်စုပ်ချရပါတယ် ဒီအချိန်မှာပဲကျန်တဲ့အခြောက်မတွေကိုပါပါးစပ်ဟခိုင်းပြီးကျမပါးစပ်ထဲကလရည်တွေကို သူတို့ပါးစပ်ထဲထွေးထည့်ပေးတော့အငမ်းမရသောက်ကြပါတယ်.. ဇွန်သစ္စာကတေ့ာမျော့နေပြီသူတယောက်ပဲကိတ်တာ ကျန်တဲ့ကောင်မနှစ်ကောင်ကလီးသာပါတာစားမလောက်သောက်မလောက်တွေဆိုတော့ကာ ကျမအကြံထုတ်ရပါတော့တယ်။ ကဲနင်တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကပက်လက်လှန်ဆိုတော့ ပန်းအိပ်မက်ကပက်လက်လှန်ပြီးလီးထောင်ပေးတယ် ကျမလဲစောက်ပက်ကိုထိုးထည့်ပြိးသုံးလေးချက်ဆောင့်လိုက်တယ် ဖီးလ်မရှိလှဘူးအခြောက်အများစုကလီးစံချိန်မမှီလို့ခြောက်ကြတာလေ ကျန်တဲ့တယောက်ပါခေါ်ပြီးအနောက်ကနေစောက်ပက်ထဲသူ့လီးပါထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အခုကျမစောက်ပက်ထဲလီးနှစ်ချောင်းနဲ့အပြည့်အသိပ်ဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမယ့်ကျမဆိုတာအပေါက်စုံမှ အာသာပြေတာလေအမောဖြေနေတဲ့ဇွန်သစ္စာကိုသူတို့သုံးနေကျလီးတုတချောင်းသွားယူခိုင်းလိုက်တယ် ကောင်မကရွဲ့တာလားဘာလားတော့မသိဘူးရှစ်လက်မဆိုဒ်ဘုတွေဒစ်တွေနဲ့ဟာကြီးယူချလာတယ်မဆိုးပါဘူး ဗိုက်ဗရေတာပါတော့ပျော်ပြီလေလီးတုကိုကျမဖင်ပေါက်ထဲထိုးထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်.. ဟားးးအခုမှတကိုယ်လုံးပြည့်ကြပ်ပြီးအရသာရှိတော့တယ်။
အခြောက်မနှစ်ကောင်အပေါ်တယောက်ေ်အာကတယောက်ဆောင့်နေကြချိန်ဖင်ပေါက်မှာလဲဗိုက်ဗရေတာနဲ့ ကျမအပြတ်ကိုကောင်းနေပါတယ်ဇွန်သစ္စာကိုလဲအနားခေါ်ပြီး သူ့နို့ကြီးတွေလှန်းဆွဲနေတယ်ဟိုနှစ်ယောက်ကဆေးထိုးရုံဆိုတော့သိပ်မလန်းဘူးမကြီးလှဘူးလေ။ အား အမလေးအိမ့်မရယ်ကောင်းလိုက်တာလိုးပါငါ့လီးကျိးုအောင်လိုးလိုက်စမ်းပါ ဒါမျိုးကောင်းမှန်းမသိလို့ဖင်ပတ်ခံနေတာ နောက်ဆိုငါ့ဆီဖင်လာချတဲ့ကောင်တွေကိုပြန်လိုးပစ်မယ်အီးးရှီးးဆိုတဲ့အသံတွေဆူညံနေတာပါဘဲ တနာရီနီးပါးလောက်ဝက်ဝက်ကွဲလိုးပြီး ချိန်မှာတော့အခြောက်တွေလဲလရည်ထွက်ကျမလဲအရည်ထွက်ပြိး ပြိုင်တူပြီးသွားကြပါတယ်ရှင်….။ အခြောက်တွေဆီကပြန်လာပြိးအဲဒီတနေ့ စာပြည့်ဝသွားခဲ့ပေမယ့်နောက်ရက်မှာတော့အစရှိအနောင်နောင်ခံချင်စိန်အိမ့်တယောက်သတင်းလဲမပေါက်ကြား အလိုးလဲကောင်းမယ့်သူတယောက်ကိုထပ်ရှာရပါတော့မယ်.. ကိုကိုပြန်လာဖိုကလဲလေးရက်လောက်လိုသေးတယ်.. ဒါတောင်ညဘက်စကိုက်မှာနို့လှန်ပြဖင်ကုန်းပြစောက်ပက်ဇောင်းတိုက်ပြပြီး အခါခါပြီးခဲ့တာတွေမပါသေးဘူး။အိပ်ယာနိုးထဲကတခုခုလိုအပ်နေတဲ့ ကျမဟာအိမ်ကရေပိုက်ပျက်လို့ခေါ်ထားတဲ့ရေပိုက်ပြင်မယ့်ကုလားကြိးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာသိပ်ကိုပျော်သွားပါတယ် အတွင်းခံမဝတ်ထားတဲ့သူ့ပုဆိုးပါးအောက်ကမတောင်သေးတဲ့လီးဟာနေရောင်အောက်မှာမှန်းကြည့်ရတာနဲ့တင် ၇လက်မလောက်ရှိပြီးအချိုရည်ပုလင်းခွံလောက်တုတ်မယ်ထင်ရပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ဒီကုလားငါနဲ့တွေ့ပြီလေအကြံအစည်ရှိတဲ့ကျမညဝတ် အကိင်္ျီအဖြူရောင်အပါးဆုံးတထည်ယူဝတ်လိုက်တယ် ဂါဝန်အတိုလေးပေါင်ရင်းမှာဝဲနေတာလေးပေါ့ အောက်ကဘရာဇီယာရောစပ်စပိုင်ဒါရောချွတ်လိုက်တယ်.. အိုခေ..ဒီလောက်ဆိုကုလားကြီးလီးမတောင်ရင်ပန်းသေနေလို့ဘဲ. .ရေပိုက်ပြင်နေတဲ့ကုလားကြီးနားမယောင်မလည်နဲ့သွားပြီး ဘာကူပေးရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်..လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ ဖောင်းပြီးတင်းနေတဲ့နို့နှစ်လုံးရယ်အမွှေးမဲမဲလေးနဲ့စောက်ပတ်ရယ်ကိုဂါဝန်ပါးအောက်မှာရိပ်ခနဲတွေ့လိုက်ရလို့ လည်ဇလုတ်ကြီးဂလုခနဲမြည်အောင်တံတွေးမြိုချလိုက်တာ မြင်လိုက်ရတယ်…။သူ့ရင်ဘတ်ကအမွှေးကောက်ကောက်တွေမှာချွေးတွေသီးနေတယ်.. လျှာနဲ့လျက်ပေးချင်စိတ်ကဖြစ်လာမိတယ်.. ဦးလေးလိုအပ်ရင်ခေါ်လိုက်နော် ကျမအခန်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကာအခန်းထဲဝင်နေလိုက်တယ်.. တံခါးကိုတော့ဟစိလေးထားလိုက်တယ်…ကုတင်ပေါ်မှာပေါင်နှစ်ချောင်းကားပြီး ကိုယ့်စောက်စိကိုယ်ပွတ်ရင်း တအင်းအင်းညီးကာကုလားကြီးလာချောင်းမယ့် အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်..ဟောသူလာပါပြီ.. ကျမအခန်းတခါးပေါက်ကနေလာချောင်းနေတာသူပိုပြိးလီးတောင်လာအောင်ကျမနို့ကြီးတွေကို လက်တဖက်ကကိုင်စောက်ပက်ထဲလက်နှစ်ချောင်းထိုးထည့်ပြီး အားအမလေးလိုးပါလိုးပါမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ညီးပြီးဖင်ကိုကော့ကော့ပြလိုက်တယ်..။
ကုလားကြီးလဲဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘဲအခန်းထဲပြေးဝင်လာပါတယ်..ကျမက ဟာ ..ရှင်ဘာလာလုပ်တာလဲအခုထွက်သွားလို့ မူပြီးအော်တော့ မမလေးရယ်ကျနော်မရတော့ဘူးမမလေးသိပ်လှတာပဲကျနော်လိုးပါရစေဗျာလို့အော်ပြီးကျမပေါင်ကြားခေါင်းထိုးကာ ကျမစောက်ပက်ကိုအတင်းလျက်ပါတော့တယ်.. ကုလားကြီးကကွမ်းတွေစားထားတော့လျှာကအတေ်ာထူပါတယ်သူ့လျှာကြီး ကျမစောက်ခေါင်းထဲဝင်လိုက်တိုင်းတဆတ်ဆတ်တုန်အောင်ကောင်းလွန်းတယ်.. အမလေးကောင်းလှချည်လားဦးရယ်စောက်စိလေးလျက်ပေးပါဦး အားပါးပါးမျှင်းပြီးစုပ်ပေးပါဦးဆိုပြီးအော်နေရတယ် ဘာဂျာသိပ်ကျွမ်းတာဘဲကျမဖြင့်လူးလှိမ့်နေပါတယ်။ စုပ်ကောင်းကောင်းနဲ့စုပ်နေတာကျမအရည်တွေထွက်ပြီးတချီပြီးသွားပါပြီ.. ကုလားကြီးခေါင်းကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ် မမလေးရယ်စောက်ပတ်လေးကမွှေးပြီး ချိုနေတာဘဲကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတယ် ပြီးတော့ ကျမနို့တွေကိုနယ်ပြိးနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ပါတယ် ကျမကိုပက်လက်ထားပြီးအပေါ်ကနေတက်လိုးပါတော့တယ်..
ကုလားကြီးရဲ့လီးဟာကြီးသလောက်အဝင်ကောင်းပြီးအရသာရှိလှပါတယ်.. အလုပ်ကြမ်းလုပ်သူဆိုတော့အားလဲသန်ပြီးဆောင့်ချက်ကပြင်းထန်တယ် မမလေးပက်လက်နေရတာထက်ဖင်ကုန်းလိုက်ပါလားလီးအဝင်နက်တာပေါ့လို့ပြောပါတယ် ကျမကလဲနဂိုထဲကကုန်းချင်နေတာဆိုတော့ချက်ချင်းလူးလဲထပြီး ဖင်ထောင်ကုန်းကာခါးကိုခွက်ပြီးအကောင်းဆုံးအနေအထားရောက်အောင်နေပေးလိုက်တယ်.. ကျမဖင်ကြိးကိုဖြောင်းခနဲချပြီးဖင်လုံးနှစ်လုံးကိုကိုင်ပြီးအားရပါးရဆောင့်ပါတယ်။ အား ကုလားကြီးရယ်ရှင့်လီးကိုတော့ခိုက်သွားပြီဆောင့်စမ်းပါကျမဖင်ကြီးကွဲအောင်သာဆောင့်အမလေး နို့ကြီးတွေလဲဆွဲပေးပါဦးလို့အော်ဟစ်ပီးအိပ်ယာကိုတဘုန်းဘုန်းထုနေပါတယ် ကုလားကြီးကလဲကျမနို့ကြီးတွေကိုဆောင့်စွဲပြီးအားကုန်ကျုန်းလိုးနေတာအချက်ပေါင်းရာချီနေတာဘဲ ကျမလဲအီစိမ့်နေအောင်ခံပြီးချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူပြီးသွားပါတော့တယ်…။ အဲ့ဒီနေ့တနေကုန်ကုလားကြီးကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ပြိးနို့တိုက်လိုက် . ကျမစိတ်ရှိလက်ရှိတဖောင်းဖောင်းနဲ့ဆောင့်ချနေပါတယ်..
ခုချိန်မှာကျမကယောကျာ်းတယောက်လိုတောင်ထင်မိတယ်.. သူ့နို့ကြိးတွေကိုလကသူ့လီးစုပ်ပေးလိုက်သူက ကျမစောက်ပက်ကိုကလိလိုက်ဖင်ကိုလျှာနဲ့လျက်လိုက်ဖင်ပေါက်ကိုလိုးလိုက်နဲ့ ညမိုးစုန်းစုန်းချုပ်မှဘဲပိုက်ပြင်ြပီးအိမ်ပြန်သွားပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ကိုကိုပြန်လာမယ့်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ.. လေဆပ်မှာသွားကြိုရမယ်ဆိုတော့ကိုကို့အကြိုက်ဆက်ဆီမိတ်ကပ်ပင်လိုက်တယ်.. ယောကျာ်းတွေရဲ့လိင်စိတ်ကိုကြွစေတဲ့အရောင်ကအနီရောင်နဲ့အဝါရောင်တောက်တောက်လေ…ကျမကတော့အနီရောင်ရင်ပြတ်အင်္ကျီဝတ်လိုက်ပြီးနို့ကိုကြွစေတဲ့ပင့်ဘရာဝတ်လိုက်တယ် ကျမနို့အုံတွေကအင်္ကျီအပြင်ကိုကျော်ပြီးဖုဖောင်းလျှံကျမတတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ တဆက်ထဲဝတ်စုံပုံစံမို့ချပ်ရပ်နေတဲ့ဗိုက်သားရယ် သေးကျဉ်ပြီးဖက်ချင်စရာခါးလေးရယ် တောင်ပူဆာတခုလိုဖောင်းထွက်နေတဲ့တင်ပါးရယ်နဲ့ ကျမကိုလေဆိပ်ကလူတွေတငေးငေးပေါ့နော်.. ကိုကိုလဲဆင်းလာရော ကျမကိုပြေးဖက်တယ်..နားနားကပ်ပြီး လွမ်းလိုက်ရတာချစ်အိမ့်ရယ်ဆိုပြီး လက်ကရင်သားဆီရောက်လာပြန်တယ်။
ဟိုးဆရာကိုကိုလူကြားထဲမှာလေလို့ပြန်ပြောပြီးလွမ်းတာကလူကလွမ်းတာလားလ်ီးကလွမ်းတာလား လူကိုလွမ်းတာလားစောက်ပက်ကိုလွမ်းတာလားလို့မေးတော့ လူကလူကိုလွမ်းတယ်လီးကစောက်ပက်ကိုလွမ်းတယ်တဲ့.. ခိခိ..စကားတတ်တယ်နော်အိမ့်ကိုကိုက..ပြီးတော့အိမ့်ကားကိုတခါထဲဗိုလ်တထောင်ကမ်းနးမောင်းကွာ ကိုကိုမနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့.. ဟိုတယ်သွားမယ်ဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူးပြင်ပဆက်ပဲလုပ်ချင်တာဆိုတော့ ကိုကို့သဘော..ကမ်းနားရောက်တော့ညနေစောင်းလူရှုပ်ချိန်ပေါ့.. ကားကိုရပ်ပြိးတာနဲ့နောက်ခန်းရွှေ့ပြီးကိုကိုကအငမ်းမရနမ်းပါတော့တယ်..။ ပင့်ဘရာထဲကနေနို့ကြီးတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးနယ်အောက်ကနေစောက်ပက်ကိုလက်နှိုက်ပြီးထိုး လျှာနဲ့လည်တိုင်ကိုကလိပါတော့တယ်… အဲ့ဒီအချိန်ကားနားကိုကောင်လေးသုံးယောက်လာချောင်းတာတွေ့တယ်.. ကိုကို့ကိုပြောပေမယ့်အဲလိုအချောင်းခံရတာကိုကအရသာရှိတယ်ဆိုပြီး သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေပါတော့တယ်..
ကိုကိုမောလာတယ် အိမ့်လေးအပေါ်ကတက်ဆောင့်ပေးနော်ဆို့လို့အပေါ်ကနေတက်ခွပြီးဆောင့်ရတယ် ဖင်ကြီးကိုစကောဝိုင်းပြီးဆောင့်ချတာကိုကိုအကြိုက်ကိုအိမ့်ကသိပြီးသားလေ ကိုကိုစိတ်ပိုကြွအောင်ကိုယ့်နို့ကြီးတွေကိုယ်နယ်ပြပြီးနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်အားကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ် ကိုကို့လီးကြီးအိမ့်စောက်ပက်ထဲမှာသိမ်းထားခဲ့ပါလား ကိုကို့လီးမရှိရင်မနေတတ်တော့ဘူးလို့အော်ပြီးဆောင့်ချနေမိတယ်။ ချောင်းနေတဲ့ကောင်တွေဆီက ဆော်ကြီးမိုက်တယ်ကွာအပေးကောင်းလိုက်တာအောက်ကကောင်ဇိမ်ဘဲအားကျတယ်လို့ပြောပြီး ဂွင်းထုနေတာကိုအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်.. ပုံစံပြောင်းချင်တာနဲ့ ကိုကိုခဏနော်ဆိုပြီးစောက်ပက်ကနေလီးကိုချွတ်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်တယ် ဒစ်ထိပ်ကိုစွဲပြီးစုပ်လိုက်လီးတချောင်းလုံးအာခေါင်ထဲဝင်အောင်စုပ်လိုက်နဲ့ အစွမ်းကုန်ပြုစုလိုက်တယ်ပြီးတော့ ကိုကို့ကိုနောက်ကြောပေးပြီး စအိုထဲလီးထည့်ကာဖင်ကြီးရမ်းခါပြီးဖင်လ်ုိးခံနေပါတယ်.. အိမ့်တနာရီလောက်ဆောင့်ပြီးတော့ကိုကိုလဲပြီးသွားလို့ရင်ခွင်ထဲမှာအမောဖြေလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျေးဇူး ရှင် ဒရိုက် ဘာလေး
အပျို ကညာလေး ရ့ဲ ကလဲ့စား